诗篇 20 CCB - Nnwom 20 NA-TWI | Biblica América Latina
诗篇 20 CCB - Nnwom 20 NA-TWI
1Awurade ntie wo wɔ wo haw mu! Yakob Nyankopɔn mmɔ wo ho ban! 2 Ɔmma wo ne mmoa mfi n’asɔrefi ne Sion Bepɔw so. 3 Onnye w’afɔrebɔde nyinaa na ne nyinaa nsɔ n’ani. 4 Ɔmma wo nea ehia wo, na wo nhyehyɛe nyinaa nyɛ ye. 5 Na yɛateɛm adi ahurusi wɔ wo nkonimdi no ho na yɛakamfo Onyankopɔn wɔ nea wayɛ ama wo no ho. Awurade nyɛ w’abisade nyinaa mma wo.
6 Afei minim sɛ Awurade ma ne hene a wayi no no di nkonim. Otie no wɔ ne soro kronkron na ɔnam ne tumi so ama wadi nkonim akɛse. 7 Ebinom de wɔn ho to wɔn nteaseɛnam a wɔde kɔ ɔko so, na afoforo nso de wɔn ho to wɔn apɔnkɔ so, nanso yɛn de, yɛde yɛn ho to yɛn Awurade Nyankopɔn tumi so. 8 Saa nnipa no hintiw, hwe ase, na yɛn de, yɛbɛsɔre agyina pintinn.
9 Ma ɔhene nni nkonim, O Awurade; na sɛ yɛfrɛ nso a, gye yɛn so.
NA-TWI : Nnwom 20